सङ्क्रमितको बयान : आफ्नो ख्याल आफैले राखेर बाहिरिएँ | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
(January 27, 2021)
सङ्क्रमितको बयान : आफ्नो ख्याल आफैले राखेर बाहिरिएँ
भदौ १५, २०७७ सोमबार २०:२२:५३ | नवराज फुयाँल
चीनको वुहान शहरबाट फैलिन सुरु भएकाे काेराेना भाइरसले अहिले विश्वको सबै देशको चक्कर काटिसकेको छ ।
यो भाइरस नेपाल नछिर्ने कुरै भएन । पहिलाे कुरा चीन हाम्रो छिमेकी देश हो । दोस्रो कुरा यसलाई कुनै राजनीतिक सीमाले बाँध्न सकेन । त्यसैले पनि यो भाइरस नेपाल भित्रिनबाट कसैले रोक्नै सकेन ।
एउटा कुरा चाहिँ पक्का के हो भने विश्वको सयभन्दा बढी देशको चक्कर काटेपछि मात्रै यो भाइरसले नेपालकाे यात्रा तय गरेको हो ।
पुस महिनाको दोस्रो सातातिर चीनमा देखिएको यो भाइरस नेपालमा भने माघको अन्त्यमा आएर देखियो ।
त्यसपछि फाट्टफुट्ट देखिएको यो भाइरस चैतमा आइपुग्दा भने यसले आफ्नो नेटवर्क विस्तार गर्न भ्यायो ।
सरकारले चैत ११ देखि देशभर लकडाउन घोषणा गर्‍याे र आजसम्म आइपुग्दा विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा र लकडाउन जारी नै छ ।
यो त भयो कोरोना भाइरसको चर्चा । यसले गरेको विश्व भ्रमणको कुरा ।
अब भने आफ्नै कुरा गरौँ । माघ महिनादेखि मेरो पनि कार्यथलो परिवर्तन भएको थियो । काठमाण्डौमा रहेर उज्यालो मल्टिमिडियामा कार्यरत रहेको म माघ महिना वीरगञ्ज पुगेँ । अहिले पनि वीरगञ्जमै रहेर एउटा रेडियो सञ्चालनको जिम्मेवारी वहन गरिरहेको छु ।
कोरोना भाइरस नेपाल भित्रिसकेको छ । भर्खरै सञ्चालन गर्न सुरु गरिएको रेडियो लकडाउनका कारण बजार बन्द हुँदा विज्ञापनका स्रोत पनि बन्द भयो । यद्यपि छोटो समयमै रेडियोको परिचय स्थापित गराउन सफल भइएको छ । विज्ञापनकै आम्दानीमा निर्भर रेडियोले विज्ञापन नै नपाउँदा गोजीबाट लगानी गरेरै पनि सञ्चालकहरुले रेडियोको गुणस्तर खस्कन भने दिएका छैनन् ।
रेडियो सञ्चालनकै सन्दर्भमा विभिन्न ठाउँमा हिँडिरहनु पर्ने आफ्नो बाध्यता छ नै । कोरोनाको कहर बढिरहेकै छ । यसबीचमा नागरिकलाई कोरोनाबाट बच्न अपनाउनु पर्ने सावधानी तथा आवश्यक सुरक्षा सचेतना अपनाउन सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्वबाट पाखा लागेर रेडियो बन्द गरेर घरमै बस्ने कुरा पनि भएन । आफू सुरक्षित भएर आमनागरिकलाई पनि आवश्यक सावधानी अपनाउन रेडियोमार्फत सन्देश प्रवाह गर्दा गर्दै आफै भाइरसको चपेटामा परियो ।
असार तेस्रो हप्तादेखि साउनको पहिलो हप्तासम्म लकडाउन खुकुलो हुँदा भाइरस समुदायस्तरमै फैलिने मौका पाएछ । साउन दोस्रो हप्ता वीरगञ्जमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्यो । त्यसपछि एकपछि अर्को गर्दै वीरगञ्ज कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको 'इपिसेन्टर' नै बन्न पुग्यो ।
भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढेको भए पनि सूचना सन्देश प्रवाह गर्ने हाम्रो दैनिक कार्य रोक्ने कुरा पनि भएन । रोकिँदा पनि रोकिएन । महामारीका बेला सूचना प्रवाह गर्ने धर्मबाट विमुख हुनु हामीलाई थिएन ।
यसैबीचमा स्थलगत रुपमै विभिन्न ठाउँमा गएर रेडियो सामग्री तयार पार्ने काम निरन्तर भइरहेको थियो । मुखमा मास्क र हातमा स्यानिटाइजरको राज चलिरहेकै थियो । बेलाबेला साबुन पानीले हात धुने पनि गरिएकै हो । तर यसका बाबजुद पनि भाइरस शरीरभित्र छिरेको पत्तै भएन । हुन त हाम्रो नाङ्गो आँखाले देख्ने भए पो थाहा हुन्थ्यो ।
भदौ महिनाको पहिलो दिन दिइएको स्वाब परीक्षणको नतिजा भोलिपल्ट आयो । नतिजा पोजेटिभ थियो । अर्थात् म पनि कोरोना सङ्क्रमित हुन पुगेँ ।
अलिअलि डर, अलिअलि तनाव अनि अलिअलि अचम्म लागिरहेको थियो । कसरी लाग्यो होला भन्नेमा म अचम्म थिएँ ।
सम्पन्न भनिएका देशमा पनि कोरोना सङ्क्रमितको अवस्था दयनीय रहेको विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा देखेकाले आफै सङ्क्रमित भएपछि डर, तनाव नहुने कुरै भएन ।
मन गह्राैँ पारेर मुटु दह्राे पार्ने प्रयास गर्दै रिपोर्ट आएको भोलिपल्ट कोभिड अस्पताल भर्ना भएँ । रिपोर्ट पोजेटिभ आउँदा शरीरमा कुनै लक्षण थिएन ।
त्यसैले घरमै सुरक्षित बस्ने निर्णय गरेर श्रीमतीले आवश्यक व्यवस्थापन पनि मिलाइदिइन् । तर पहिलो दिन बित्न नपाउँदै भोलिपल्टै घर वरपरकाले गरेको व्यवहारले अस्पताल जाने बाध्यता आइपर्‍याे ।
भदाै ३ गते अस्पताल भर्ना भएको म भदाै १२ गते दोस्रो रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि घर फर्किए ।
३ गतेदेखि १२ गतेसम्मको अवधि वा भनौँ अस्पताल बसाइँकाे अवधि मेरो लागि स्मरणीय अवधि रह्यो ।
बाहिर बसेर रिपोर्टिङ गर्दा सङ्क्रमितको उपचार कसरी गरिन्छ होला ? के औषधि दिइन्छ होला ? भन्ने कुराको कल्पना गरिन्थ्यो । तर आफै सङ्क्रमित भएर अस्पताल पुगेपछि यी सबै कुराको एकमुष्ट जवाफ भेटियो ।
अस्पतालमा राखिएका सङ्क्रमितलाई डाक्टरले सेवा गर्ने होइनन् कि सफाइकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीेले बढी सेवा गर्ने रहेछन् । त्यसमा पनि सफाइकर्मी त सङ्क्रमित राखिएका ठाउँको सफाइदेखि उनीहरुलाई खानपान गराउन थोरै पनि डर नमानी खट्दा रहेछन् ।
सङ्क्रमितहरुले सितिमिति डाक्टरको सेवा नै पाउँदैनन् । स्टाफ नर्स, एचए, अनमी तहका स्वास्थ्यकर्मी बरु बेलाबेला पुगेर गाह्राे–साह्राे भएका सङ्क्रमितको उपचार गरिरहेको भेटिन्छ । तर डाक्टरहरु भने सङ्क्रमितहरुलाई के भइरहेको छ भन्ने कुरा जान्न पनि पुग्दैनन् ।
स्वयं सङ्क्रमित भएर अस्पतालको बेडमा पुगेको यो पङ्तिकारलाई पनि त्यो १० दिने अस्पताल बसाइँका क्रममा कोही कसैले पनि तपाईँलाई अहिले कस्तो छ भन्दै सोध्नै आएन ।
मसँगै अस्पतालमा रहेका अर्का सञ्चारकर्मीलाई श्वास फेर्नै गाह्राे भएको र दुई/तीन दिनदेखि डाक्टरहरुलाई आफ्नो समस्याबारे बताउँदा पनि कुनै उपचार नगरिएको घटनाबारे जानकार रहेकाले पनि कुनै लक्षण नभएको मलाई आएर अस्पतालका कसैले सोध्लान् भन्ने आशा थिएन ।
आफ्नो ख्याल आफैले राख्नु बाहेक अर्को उपाय मसँग थिएन । अस्पताल भर्ना भएकै दिन विभिन्न थरीका औषधि दिइएको थियो । ती औषधि लक्षणअनुसार नै सेवन गर्नुपर्ने खालका थिए । ज्वरो आउँदा, घाँटी दुख्दा, श्वास फेर्न गाह्राे हुँदा प्रयोग गर्नुपर्ने औषधि र विभिन्न थरीका भिटामिनका चक्की दिइएको थियो । कस्तो लक्षण देखिएको छ ? कुन–कुन औषधि खाने भन्नेबारे केही पनि नभनी सबै खाले औषधि सबैलाई दिने गरिएको रहेछ । बुझ्नेले त लक्षणअनुसारकै औषधि प्रयोग गर्लान्, नबुझ्नेले त बिनासित्तिमा सबै औषधि सेवन गरिरहनुपरेको छ । त्यसले उनीहरुको स्वास्थ्यमा असर त पक्कै परेको होला ।
अस्पतालमा उपचारपछि निको भएर यति जना आज निस्किए भनेर मैले पनि समाचार बनाएको छु । तर अस्पताल पुगेका सबैको उपचार नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा आफै अस्पताल पुगेपछि थाहा पाएँ । भिटामिनकै गोली खाएको भरमा हुने थियो भने म घरैमा बसेर निको हुने थिएँ । किन अस्पताल धाइरहनु पर्ने जरुरी थियो र ?
अर्को रोचक कुरा पनि त्यही बसेपछि मात्रै थाहा भयो ।
सङ्क्रमित भइसकेपछि आइसोलेशनमा बस्नुपर्छ र आइसोलेसन भनेको चाहिँ सङ्क्रमितलाई एक्लै राख्ने भन्ने बुझिएको थियो । उसले प्रयोग गर्ने रुम, शौचालय सबै छुट्टै हुनुपर्छ भन्ने कल्पना थियो । डाक्टरहरुसँग कुरा गर्दा पनि उनीहरु त्यसै भन्थे । तर आइसोलेशन भनिएका अस्पतालमा के त्यसरी नै राखिने रहेछ त ? पहिला त यस्तै कल्पना हुन्थ्यो । पक्कै यसरी नै राखिन्छ होला भन्ने लाग्थ्यो । तर आफैले त्यो अनुभव बटुलेपछि भने यी सबै कुरा डर देखाउनका लागि मात्रै भनिएको रहेछ झैँ लाग्छ ।
किन भन्नुस् न, आइसोलेशन भनिएको मैले १० दिन बिताएको अस्पतालमा ५०/६० जना सङ्क्रमितले प्रयोग गर्ने शौचालय ६ वटा मात्रै थियो ।
नुहाउन त पालो कुरेर एकै ठाउँमा सबैले नुहाउनु पर्ने बाध्यता थियो ।
अनि यसरी एकैठाउँमा बसेका सङ्क्रमितहरु १०/१२ दिनमा नेगेटिभ हुँदै बाहिरिन्थेँ । यो अचम्म लाग्दो कुरा होइन र ? तपाईँ आफै भन्नुस् त । सङ्क्रमितहरु निस्किने र नयाँ थपिने क्रम चलि नै रहेको छ ।
यदि यो भाइरस एकैठाउँमा बस्दा सर्ने थियो भने अस्पतालमा राखिएका ती सङ्क्रमितहरु त कहिल्यै पनि निको नहुन पर्ने हो नि ! किनकि उनीहरु त सङ्क्रमित–सङ्क्रमित बीच नै बसेका छन् । हो बेड केही दुरीमा छ, त्यो बाहेक सबै कुरा साझा प्रयोग गर्नुपर्छ ।
खानेपानी एउटै ठाउँबाट भर्नु पर्‍याे, नुहाउन तथा मलमूत्र त्याग गर्न सबै साझा नै प्रयोग गर्न परेपछि कसरी सङ्क्रमित निको भइरहेका छन त ? कसरी १० दिनपछि नै रिपोर्ट नेगेटिभ देखाइएको छ ? यो कुरा बुझी नसक्नुको छ ।
मैले यसो भनिरहँदा स्वास्थ्यमा निकै समस्या भएका साथीहरु पनि अस्पतालमा उपचाररत छन् । कोरोनाकै कारण आफन्त गुमाएकाहरुले पनि यसलाई केही नभएकाले यस्तो भनेको जस्तो लाग्ला । तर यथार्थ के हो भने जुन रोगको उपचार गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो, त्यसको उपचार नपाएर मानिसहरुले ज्यान गुमाउन पुगेका हुन् । मुटु रोगीलाई मुटुकै उपचार हुनुपर्थ्याे । टाइफाइड, निमोनिया भएकालाई त्यसैको । मिर्गाैलाकाे डायलासिस गर्न नपाएर मान्छे मर्छ तर भनिन्छ कोरोनाको कारण ज्यान गयो । यसैले पनि अस्पतालहरुले जुन रोगको बिरामी हो, त्यसैको पहिला उपचार गर्नुपर्छ । कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ आयो भन्नेबित्तिकै जटिल बिरामीको उपचार नपाउने स्थिति देखिएको छ ।
सङ्क्रमित हुनेबित्तिकै यो त खतरनाक राक्षस हो, यसले सबैलाई मार्छ भन्ने चिन्तन डाक्टरकै मानसिकतामा परेको देखिन्छ ।
कोरोना लाग्दैमा केही हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा म आफैले भोगेर फर्किएको छु । अस्पताल बस्दा पनि मैले सामान्य भिटामिनका गोली बाहेक कुनै औषधि सेवन गरिनँ । तातोपानी र बरु आयुर्वेदिक जडीबुटी गुर्जोको सेवन गरेँ ।
त्यसैले कोरोनासँग डराएर होइन, यससँग सम्बन्ध बढाएर सँगै अघि बढ्नु जरुरी छ । न यसको ठोस उपचार छ, न त यसको कुनै औषधि नै । ज्वरो आउँदा, घाँटी दुख्दा, श्वास फेर्न गाह्राे हुँदा खाने औषधि त पहिलेदेखि नै प्रयोगमा छ नि ।
त्यसैले अहिले जारी राखिएको यो लकडाउन, शटडाउन, निषेधाज्ञा सबै हटाउँदै जनजीवन सामान्य बनाउनतर्फ सबै लाग्न जरुरी छ । होइन भने नागरिकहरु रोगले भन्दा बढी भोकले मर्ने छन् । अनि अर्को कुरा यदि सरकारले कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा सङ्क्रमितको व्यवस्थापनका लागि कुनै सहयोगको आवश्यकता ठान्छ भने निसङ्कोच विना पीपीई नै सेवा दिन यो पङ्तिकार पछि हट्दैन ।
अन्तिम अपडेट: मंसिर ३, २०७७
फुयाँल सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ । उहाँ राजनीति, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।
krishna man Mali
Sept. 2, 2020, 9:43 p.m.
बास्तविकताको जानकारी गराउनुभएकोमा लेखकलाई धन्यवाद ! यो धेरै ठूलो षड्यन्त्र, के को लागि बनाइएको हो थाहा भएन, तर देशले (बिश्वले पनि ) ठुलो दु:खका साथै नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ , यो लकडाउनले तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्छ /
हिमालय र यती एअरलाइन्सबीच व्यावसायिक सहकार्य
माघ १४, २०७७ बुधबार
बुधवार विशेष : कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका डाक्टरको मुस्कान
‘१० देखि १५ मिनेटभन्दा बढ्ता हठ नर्गनुस् है, बहस सुन्दा–सुन्दा ...
इलाममा ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एककाे ज्यान गयो, दुई ...
पहिलाे दिन नाै हजारभन्दा धेरैले लगाए काेराेना खाेप
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय
विश्वमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या १० करोड नाघ्यो
महिला लिगमा कुसुमकाे पनि ह्याट्रिक
आउँदाे चुनावमा प्रचण्ड–माधव समूहकाे १० सिट पनि आउँदैन, बरफ ...
पुलिसलाई ३० रनले हराउँदै एपीएफ प्रधानमन्त्री कपकाे फाइनलमा
कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएसँगै डाक्टरको मुस्कान : ‘खोप सुरक्षित...
२४ घण्टामा २८३ जनामा काेराेना सङ्क्रमण
वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा म्यानपावरलाई पैसा बुझाउनुअघि यी कु...
क्याल्सियम भरिएको मुटुको नशाको विना शल्यक्रिया उपचार अब नेपालमै
‘हात खुट्टा तनक्क पारेर निदाउन मन छ’
‘माउण्ट केटू म पनि जान पाएको भए...’
माउण्ट के टूको शिखरमा जागेको अद्भुत एकता
'पुनर्जन्म' हुने अन्धविश्वासमा भारतमा दम्पतीले गरे दुई छोरीको हत्या
खोप सुरक्षित छ, शंका गर्नु पर्दैन
माघ १२, २०७७ सोमबार
लालची स्वभाव कोरोना भन्दा पनि खतरनाक छ है !
माघ ७, २०७७ बुधबार
नेकपामा शब्दवाणको प्रतिस्पर्धा र गाली संस्कृति
माघ ४, २०७७ आइतबार
झुलाघाट : यस्ताे छ महामारीपछि नेपाल–भारत नाका
वडा सदस्य भएपछि रेखाको व्यस्त दैनिकी
राप्तीसोनारीमा बढ्दै बालविवाह, रोक्न चुनौती
परदेशमा भए पनि निःशुल्क कोरोनाको खोप लगाउन पाएँ
घरदेशको राजनीतिक अन्योलले परदेशी नेपाली निराश
‘फलफूल टिप्ने जागिर भनेर अनकन्टार जङ्गलमा रबरको चोप निकाल्ने ...
पुस २३, २०७७ बिहिबार
कार्यकारी अध्यक्ष/सञ्चालक : गोपाल गुरागाईँ
सम्पादक : मिलन तिमिल्सिना
© Ujyaalo Multimedia Pvt. Ltd.- 2021